Public Kura | » गौतमबुद्ध विमानस्थल ‘मृगतृष्णा’ बन्दै गौतमबुद्ध विमानस्थल ‘मृगतृष्णा’ बन्दै – Public Kura
गौतमबुद्ध विमानस्थल ‘मृगतृष्णा’ बन्दै
भैरहवा– समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ‘मृगतृष्णा’ बन्दै गएको छ । यहाँका हर नागरिकको व्यग्र प्रतिक्षा विमानस्थल छ । तर, निर्माण सम्पन्न र संचालनको निश्चितता छैन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले २०७१ माघ १ गते आयोजना शिलन्यास गर्दा यहा“बाट नजिकै भारतको कुशिनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सुरसार थिएन । बुद्ध धर्मावलम्बी लक्षित गरेर भैरहवाबाट करिब २ सय किलोमिटर दुरीमा रहेको कुशिनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ । तर, चार वर्ष अघि निर्माण सकिनु पर्ने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कहिलेदेखि संचालनमा आउने हो ? कुनै टुंगो छैन । यहाँ आयोजनाको म्याद थप गरेर लम्याउने काम भइरहेको छ । बौद्ध धर्मावलम्बी सिधै बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी भित्र्याउन विमानस्थल निर्माण थालिएको थियो । त्यो सपना कहिले पूरा हुन्छ ठेगान छैन ।
विमानस्थल आयोजनाको सुरुवातदेखि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन र सहठेकेदारबीच विवाद, भूकम्प, नाकाबन्दी, मधेश आन्दोलन हुँदै कोभिड संक्रमणले निर्माण धकेलिँदै आएको हो । आयोजना अहिले सातौं पटकको म्याद थपको पर्खाइमा छ । परीक्षण उडान (क्यालिब्रेशन फ्लाइट) को तयारीमा पुगेको विमानस्थल दोस्रो चरणको कोभिड संक्रमण र लकडाउनले फेरि पछाडी धकेलिएको आयोजनाले दाबी गरेको छ ।
यहाँ निर्माण पूरा भएका संरचना खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । परीक्षण उडान कहिले हुने ? सुनिश्चित हुन सकेको छैन । विमानस्थल आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले सानातिना र परीक्षण उडानका क्रममा परिवर्तन हुन सक्ने सामान्य निर्माण कार्य बाहेक अन्य ठूला निर्माण र संरचना तयार रहेको बताए ।
‘यो आयोजना अव क्यालिब्रेशन फ्लाइटमैं केन्द्रित छ’, अधिकारीले भने, ‘परीक्षण उडान भएर विमानस्थल संचालन योग्य हुने समयसम्म बाँकी निर्माण कार्य सवै सकिने छ ।’ उनका अनुसार, क्यालिब्रेशन फ्लाइट भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप करिव तीन महिनाजति संचालनका लागि समय लाग्छ । त्यो अवधिसम्ममा गर्नु पर्ने बाँकी सवै निर्माण कार्य सम्पन्न हुने छ ।
टर्मिनल भवनको फिनिसिङ, फर्निचर राख्ने, काउण्टर राख्ने काम सुचारु छन् । दोस्रो चरणको लकडाउन हुनु पूर्व आयोजना स्थलमा धमाधम उपकरण जडानका कार्य जारी थिए । बैशाखको पहिलो हप्तामैं मौसम, संचार र विमानको दिशा पत्ता लगाउने सम्बन्धि महत्वपूर्ण उपकरण जडान सम्पन्न भैसकेका थिए । आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको थियो ।
विमानलाई सुरक्षित ढंगले उडान र अवतरण गर्नका लागि विमानस्थल परिसरमा जडान गरिएका उपकरण ठिक भएनभएको र ति उपकरणले सही काम गरेनगरेको वारेमा विशेष बिमान ल्याएर परीक्षण उडान गर्ने अवस्थामा पुगेको बेला दोस्रो चरणको लकडाउनले आयोजनालाई फेरि प्रभावित बनाएको हो । आयोजनाको मौसम, संचार र विमानको दिशा पत्ता लगाउने लगायतका निर्माण कार्यलाई आइसीबी टु अन्तर्गत व्यवस्थापन गरिएको छ ।
आइसीवी टु का व्यवस्थापक तथा राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका उपनिर्देशक प्रबिण न्यौपानेले आइसीवी टु अन्तर्गतको उपकरण जडानको कार्य सकिएको र परीक्षण उडानका लागि आन्तरिक तयारी भैरहेको बताए । परीक्षण उडानका लागि आवश्यक पर्ने विशेष विमान सम्झौता अनुरुप आइसीबी टु को ठेक्का लिएको थाइल्याण्डको एरो थाइ कम्पनीको भए पनि कोभिड–१९को कारण देखाउँदै उसले समयमैं बिशेष बिमान र प्राबिधिक आयोजना स्थलमा ल्याउन चासो नदिँदा विमानस्थल संचालनमा ढिलाइ भएको हो ।
कोभिड संक्रमण विश्वव्यापी रुपमा पैmलिन सुरु भएको डेड वर्ष अघिदेखि नै बिदेशीे प्राविधिक र सबै उपकरण आउन नसक्दा आयोजनाको उपकरण जडानका कार्य अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । नागरिक उड्डययन प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले क्यालिब्रेशन फ्लाइटका लागि विशेष बिमान ल्याउन सम्झौता गरिएको थाइल्याण्डको एरो थाइ कम्पनीले कोरोना संक्रमणको कारण देखाउँदै आउँदो नोभेम्बरसम्म आफू आउन नसक्ने जानकारी गराएपछि प्राधिकरणले त्यसको बिकल्प खोजेको बताए ।
क्यालिब्रेशन फ्लाइटका लागि भारतको ‘एयरपोर्ट अर्थरिटी अफ इण्डिया’ संग सम्झौताको तयारी गरिएको उनले जनाए । ‘प्राधिकरणको निमित्त महानिर्देशक पदमा म आउनासाथ पहिलो बोर्ड बैठकमैं क्यालिब्रेशन फ्लाइटको एजेण्डामाथि छलफल गरेका छौं’, क्षेत्रीले भने, ‘त्यो बैठकले परीक्षण उडानका लागि ‘एयरपोर्ट अर्थरिटी अफ इण्डिया’ बाट बिमान ल्याउने लगभग निर्णय भैसकेको छ । त्यसलाई हस्ताक्षर गरेर आधिकारिता दिनमात्र बाँकी छ ।’
उनका अनुसार, बोर्ड बैठकको उक्त निर्णयले आधिकारिकता पाउनासाथ साता–दश दिन भित्र एयरपोर्ट अर्थरिटी अफ इण्डियासँग सम्झौता गरिने छ । सम्झौता गरेको सबै कुरा मिलेको ३०–४० दिन भित्र उसले परिक्षण उडान टुंग्याउने छ । ‘परीक्षण उडान सकिनासाथ हामी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालनको आन्तरिक गृहकार्यमा जुट्ने छौं’, क्षेत्रीले भने, ‘त्यसपछि कुनकुन एयरलाइन्सले कतिवटा उडान संचालन गर्ने ? भनेर उडान तालिकाका लागि अनुरोध गरिने छ ।’
आयोजनाको भौतिक प्रगती करिब ९७ प्रतिशत सकिएको छ । आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माण अन्तर्गत आइसीबी वानका लागि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसनको ६ अर्व २२ करोड रुपैयाँको ठेक्का हो । मौसम, संचार र विमानको दिशा पत्ता लगाउने लगायतका निर्माण कार्य आयोजनाको आइसीवी टुका लागि थाइल्याण्डको एरो थाइ कम्पनीको करिव ५० करोड रुपैयाँको ठेक्का हो ।
गत डिसेम्बर ३१ सम्म रहेको पछिल्लो पटकको छैठौं म्यादमा ६ महिनाका लागि थप गरेर आउँदो जुन ३० सम्मका लागि थप गरिएको थिायो । यो अवधि पनि सकिएपछि आउँदो डिसेम्बर महिनासम्मका लागि सातौं चरणको थप म्यादका लागि प्रकृया अघि बढे पनि निर्णय भने भैसकेको छैन ।
बौद्ध धर्ममा चारबाट मुख्य बौद्ध तिर्थस्थल लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया र कुशिनगर मानिन्छन् । जसमध्ये, बुद्धले महापरिनिर्बाण (देहत्याग गरेको) गरेको कुशिनगर मानिन्छ । निमित्त महाप्रबन्धक क्षेत्रीले कुशिनगर र लुम्बिनीको आफ्नै महत्व रहेको बताए । ‘हाम्रो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालनमा आएपछि लुम्बिनी आउने यात्रुलाई कुशिनगर विमानस्थलले खासै असर पार्ला जस्तो लाग्दैन’, उनले भने, ‘लुम्बिनी आउने यात्रु र हवाइ उडान हाम्रो आफ्नै हुन्छ ।’